ပံ့သကူခ်ပစ်နည်းလေး အရမ်းလွယ်ကူပါတယ် ပီတိဖြစ်ပြီးစိတ်ကြည်နူးချင်ရင်ဝင်ဖက်ကြည့်လိုက်နော် – Sport Gaber
ပံ့သကူခ်ပစ်နည်းလေး အရမ်းလွယ်ကူပါတယ် ပီတိဖြစ်ပြီးစိတ်ကြည်နူးချင်ရင်ဝင်ဖက်ကြည့်လိုက်နော်
(ကျွန်မ နဲ့ အတူတူ အခု လာမဲ့ (၂၉.၁၁.၂၀၂၀) တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညမှာပံ့သကူပစ်တဲ့ အစဉ်အလာလေးကို ပိုပြီးတွင်ကျယ်လာအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကုသိုလ် ပါဝင်ကြရအောင်နော်)
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည ၁၂ နာရီမွာ ပံ့သကူပစ်ပါ (မှတ်ချက်-တခြားအချိန်လည်း ပစ်လို့ရပါတယ်နော် )
￼ကိုယ်ပြန်ရမယ့် စီးပြား လာဘ္လာဘကို လုံးဝမမျှော်ကိုးပဲ စိတ်စေတနာ သဒ္ဒါတရား သန့်ရှင်းစွာဖြင့် ပံ့သကူပစ်ပါ။အစစအရာရာ ကြပ်တည်းလာတဲ့ ခေတ်မှာ ငွေပမာဏ / အလှူငွေ နှင့် ပစ္စည်းနည်းသည် ဖြစ်စေ ၊ များသည်ဖြစ်စေ ရတဲ့သူ ပျော်ရွှင်ပါစေဆိုပီး ကိုယ်တတ်နိုင်သည့် ပမာဏေလးကို စေတနာသဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာဖြင့် ပံ့သကူပစ်ပါ။ ငွေ ၅၀၀ ဖြစ်စေ၊ ဆန်အိတ် သေးသေးလေးဖြစ်စေဖန်ခွက်လေး တစ်ခုဖြစ်စေ ပံ့သကူပစ်ပါသည်လို့ စာလေးရေးပြီး ပံ့သကူပစ်ကြပါ။
အဲဒီလို ချထားတဲ့အခါမှာလဲ ဘယ်သူမှ သိလို့ မဖြစ်ပါဘူး ။ (ပံ့သကူလှူဒါန်းမယ့် မိမိတစ်ယောက် သာ သိရပါမယ်။) လူသွားလမ်း နဲ့ လူတွေ တွေ့မြင်နိုင်တဲ့ နေရာမျိုးလည်း ဖြစ်ရပါမယ်။အလှူပေးလိုက်တာပဲဆိုပြီး မည်သူမှ မတွေ့နိူင်တဲ့ ရေထဲ ပစ်ချလိုက်တာလို မျိုးတော့ မလုပ်ရပါဘူးနော် ..။ ပံ့သကူပစ္တဲ့ အခါ
ဗုံးလား၊ မသမာတဲ့ ပစ္စည်းလား ဆိုပြီး မြင်တဲ့သူ စိတ်မပူရလေအောင် … ကိုယ်လှူမယ့် ပစ္စည်းက
အိတ်နဲ့ ထည့်မှ ရမည်ဆိုလျှင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အကြည်သုံးပေးပါ။
အိတ်မလိုရင် ဒီအတိုင်းလေးပဲ ပစ်ပါနော်
￼￼￼အထူးအရေးကြီးတာက“ပံ့သကူပစ္ပါသည္” ဆိုတဲ့ စာလေးရေးထားပေးပါနော် ရေးမရရင် ကပ်ထားပေးရမှာပါနော် ။ ပံ့သကူအလှူ ပံ့သကူအလှူအဖြစ် ရထိုက်သူရစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့စွန့်ကြဲခဲ့လို့ ရရှိတဲ့ ကုသိုလ် ဟာဆိုသည်မှာလဲ ..
( ရှေး အရင် က ရဟန်းတွေ ဟာ သင်္ကန်းအလို့ငှာလှည့်လည် အလှူခံခြင်း မပြုဘဲ ၊ သင်္ချီုင်း အမှိုက်ပုံ ..စတဲ့ နေရာတွေကနေ စွန့်ပစ် အဝတ်တွေ ကောက်ယူပြီး သင်္ကန်း ချုပ်ဝတ်လေ့ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီသင်္ကန်းကို ပံ့သကူသင်္ကန်းလို့ခေါ်ဆိုပါတယ် ။
လူတွေ စွန့်ပစ်ထားတဲ့ အဝတ်ကောင်းကောင်းလေး ရပြီဆိုရင် အဲဒီ ရဟန်းအဖို့ တစ်နွေစာ သင်္ကန်းအတွက် မပူမပင်ရတော့ပဲ တရားအားထုတ်လို့ ရနိုင်ပြီပေါ့ )
￼ပံ့သကူပစ္စည်းရရှိတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဟာ အဝတ် ကောင်းကောင်းလေး တစ်ခု ရသြားတဲ့ အခါမှာ ဖြစ်တဲ့ ပီတိ နဲ့ အလားတူပါတယ်။
ကုသိုလ်ရပုံချင်းလည်း တူပါတယ်။ ပံ့သကူ ကုသိုလ်ဟာ
နောင်ဘဝရမည့်ကုသိုလ်အသာထား ၊ ယခုရမည့် ကုသိုလ် အသာထား ခုလို ကြပ်တည်းနေကြတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ….ကိုယ့်ရဲ့ပံ့သကူလေးကြောင့် ရတဲ့သူပျော်သွားရင်ကိုယ်ပီတိဖြစ်ရတာက အခုချက်ခြင်းရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ ???
￼￼ပံ့သကူရတဲ့ သူကလည်း… မည်သူမည်ဝါပေးမှန်းမသိတော့…. ဦးဘယ်သူက၊ ဒေါ်ဘယ်သူက ငါ့ကို ပေးကမ်းထားတာပဲဆိုတဲ့ အကြွေးလို ခံစားရမည့်အသိ / ကျေးဇူးကြွေး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလည်း မရှိတော့ဘူး။ရသူလည်း လွတ်လပ်စွာပျော်ရွှင်တယ်… ကိုယ်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမရှိ / ဖြူစင်စွာလှူလိုက်တယ် ! ကဲဒါဆိုဘယ်လောက်တောင် ဖြူစင် အေးချမ်းလိုက်သလဲနော် ။
ရယူတဲ့ ပျော်ရွှင်မှူထက် ပေးကမ်းလို့ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှူက ပိုအေးချမ်းရတယ် မဟုတ်လားရှင့် ….
ကဲ ပံ့သကူပစ်ပွဲအစဉ်အလာလေးလဲ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ ၁၃၈၂ခုနှစ်၊ (29.11.2020) တနဂၤေႏြေန႔ အမွီကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွကို Mention ခေါ်ပြီး ကုသိုလ်တွေ ဝေမျှ shareပေးရင်း အသိပေးလိုက်ကြပါအုံးနော် ???
ဖတ်ရှူ့ပေးတဲ့ စာဖတ် ပရိတ်သတ်ကြီးများ အားလုံး….ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေရှင် မူရင်းပို့စ်အားလေးစားလျှက်ကရစ်ဒစ်ပေးပါတယ်။